अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा सन् २०१६: हाबी हुँदै अतिवाद- विश्व - कान्तिपुर समाचार
पुस १६, २०७३ चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौं — सन् २०१६ लाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष विश्व राजनीतिमा दक्षिणपन्थ तथा चर्को राष्ट्रवाद हाबी हुने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ । यद्यपि यो क्रम वर्ष सुरु नहुँदै एसिया र युरोपबाट थालिइसकेको थियो ।
युरोपेली महासंघबाट बेलायत छुट्टिने निर्णय (ब्रेक्जिट) र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यस वर्षका ठूला दुई घटना रहे । सिरियामा जारी युद्ध र शरणार्थीको बिजोग पनि चर्चामा रहे । घटनाहरू अलग अलग भए पनि यी सबै दक्षिणपन्थतिरको झुकाव, राष्ट्रवाद र अतिवाद प्रेरित थिए ।
सन् १९४५ तिर आरम्भ भएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था असफल हुँदै गएजस्तो देखियो । फ्रान्सिस फुकोयामाले सन् १९८९ मा ‘इन्ड अफ दि हिस्ट्री’ मा ‘अब उदारवादको जमाना’ आयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर २०१६ का घटनाक्रमहरूले उदारवादकै ‘इन्ड अफ दि हिस्ट्री’ जस्तो अवस्था पो देखियो ।
यतिबेला संसारका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रियता र कट्टरपन्थको लहरै छाएजस्तो देखिन थालेको छ । औपचारिक मञ्चहरूमा ‘क्षेत्रीय सहकार्य’, ‘आपसी साझेदारी’ वा ‘विकासमा सहकार्य’ जस्ता नारा दोहोर्‍याइए पनि यथार्थमा मुलुकहरू एक्लाएक्लै अघि बढ्न थालेजस्ता देखिन्छन् ।
‘विश्वमै अनौठो किसिमको घटनाक्रम देखा परेको छ । यो देखिनु भनेको विश्व नेतृत्वमा विचारको रिक्तता आउनु हो । एक सय वर्षअघिको विश्वलाई मूल्यांकन गरेर अहिले अघि बढ्न सकिँदैन,’ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘तर अहिले त्यही भइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा कूटनीतिक विश्वास हराउँदै गएको छ । स्थापित संस्थाहरू पंगु हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरूले गर्ने काम जनमत संग्रहबाटै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।’
विश्लेषकहरू ब्रेक्जिटलाई यस्तै घटनाका रूपमा लिन्छन् । किनभने संसद्ले गर्ने कामलाई पहिल्यै जनतामा लगियो । तर पछि अदालतले पुन: संसद्मै पठायो जसलाई अन्तिम रूप संसद्ले नै नदिई धरै छैन ।
अल्पसंख्यक र आप्रवासीप्रति अनुदार मानिएका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पाएको विजयलाई पनि राष्ट्रवाद हाबीको अर्को एउटा उदाहरण मानिएको छ । अर्का पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडा अहिलेको विश्वको राजनीति अमेरिकी नीतिमा निर्भर हुने भन्दै ट्रम्प कुन रूपमा अघि बढ्छन्, त्यसले आगामी दिनको विश्व राजनीतिको आकार निर्माण गर्ने बताउँछन् । ‘पूर्वराष्ट्रपति र आफ्नै दलले समेत नपत्याएका व्यक्तिको उदयले विश्वलाई चकित पारेको अवस्थामा अहिले नै भविष्यको अडल कसरी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वको असर युरोपमा पर्‍यो । युरोपेली सहरमा डरलाग्दा आतंककारी हमला यो वर्ष भए । फ्रान्सका पेरिस र निस सहरमा आक्रमण भए । बेल्जियमको ब्रसेल्स हुँदै जर्मनीको बर्लिनमा पनि आक्रमण भयो । त्यस्तै, मध्यपूर्वमा फैलिएको अशान्ति र युरोपमा बढेको शरणार्थी समस्या पनि यो वर्ष चर्चाको शिखरमा पुगे तर त्यसको समाधान निकाल्न विश्वले अझै सकेको छैन या चाहेन । यस्तै, कारणबाट राष्ट्रवाद हाबी हँ‘दै गएको हो ।
त्रिवीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले विश्व शक्ति सन्तुलनमा द्वन्द्व हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘त्यस्तो सम्भावना अहिले विकसित विश्व राजनीतिमा देखा परेको छ ।’ यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत असर गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नै आन्तरिक नीतिभन्दा बाह्य नीतिमा अडेकाले आगामी दिनमा थप सोचविचार गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वमै अहिले राष्ट्रवाद हाबी छ । यसले अनुदारवादको वकालत गर्न थाले विश्व राजनीतिको परिस्थिति झन् बिग्रनेछ । विश्व राजनीतिको प्याराडाइम नै परिवर्तन भएको छ । क्षेत्रीय अवधारणामा विश्व कमजोर हुँदै गएको छ । यसको उदाहरण दक्षिण एसिया पनि हो ।’
उदारवादी नीतिलाई लिएर राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत सहकार्य चलिरहेको विश्वमा यतिबेला आफ्नो ‘पहिचान’ खोज्न थाल्नु आफंैमा अपत्यारिलो देखिएको छ ।
यो वर्ष ‘पानामा पेपर्स लिक’ ले पनि विश्वलाई हल्लायो । विश्वका हस्तीहरूले लुकाएका काला धन उजागर हुने भन्दै यसको निकै ठूलो चर्चा विश्व राजनीतिमा भएको थियो । परिचित विद्वान्, राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कालो धन लुकाएको पानामा पेपर्स लिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।
ब्राजिलकी पहिलो महिला राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफ बर्खास्त हुनु पनि यो वर्षको चर्चित घटनामा पर्‍यो । यस्तै, दक्षिण कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइ पनि त्यही कोटीमा परिन् । दुवै राष्ट्रपतिले महाअभियोग लागेर हट्नु परेको थियो । डिसेम्बर १९ मा टर्कीका लागि रसियाका राजदूत एन्ड्रेइ कार्लोभको सार्वजनिक स्थानमा गोली हानी हत्या भयो । सोही दिन जर्मनीको बर्लिनमा लरीले किचेर एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भयो । यी सबै घटनाले कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने काम कुनै मुलुकले गर्न नहुने भन्ने विषयलाई उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७३ ०८:१७